Du bist hier: Startseite / Walaashaydu waa eeyad (waxaan ahay wiil, 16 jir ah). Sidaas ayaan ku iri....
https://refu-tips.de/wp-content/uploads/AMYNA_logo_transparent_klein.png 0 0 editorialteam https://refu-tips.de/wp-content/uploads/AMYNA_logo_transparent_klein.png editorialteam2017-09-29 12:20:542017-09-29 12:20:54Walaashaydu waa eeyad (waxaan ahay wiil, 16 jir ah). Sidaas ayaan ku iri. Hadda ayada waxay u sheegtay qofka mas'uulka naga ahaa. Wuxuu u arkay luuqada aan isticmaalay in ay tahay mid ‘jinsi ahaan ah’. Asagu wuu caraysanyahay, sax?